Ny fanimbana ny masomboly any an-trano dia manana tombony maro. Azonao atao ny mamboly katsaka tsara ho an'ny fambolena ao amin'ny firenena raha tsy misy fitsaboana simika.
Fomba fanasitranana ny voa
Famaritana . Ampiasaina ho an'ny voa izay manana akorandriaka tena izy, izay manelingelina ny tsimok'aretina. Ao amin'ny ampahany amin'ny voa, ny fararano amin'ny maso, ny miora dia voahapaka tsara amin'ny antsy maranitra na mibontsina amin'ny taratasy matevina.
Soaking . Izany dia atao amin'ny rano mafana, ny hafanana 50-60 º C. Ny voa dia tavela ao anaty rano mandritra ny 24 ora. Mampihena ny akorany ny fanosehana. Rehefa mitsambikina ny voany dia ambolena tsy maina.
Stratification. Ny ahiahy dia mamoha ny masomboly sasany. Izy ireo dia napetraka ao anaty vata fampangatsiahana ao anaty kitapo misy fasika maina. Raha ny fitsipika dia manomboka 3-5 herinandro ny fifanarahana.
Vovon-tsakafo ao anaty fonosana iray. Ity fomba ity dia mety amin'ny voa kely. Ao amin'ny saucer dia mamelatra ny vilany maivana, izay ametrahana ny voa. Ny saucer dia napetraka ao anaty kitapo plastika, izay mifatotra. Noho izany dia noforonina ny tanimboly kely iray. Napetraka tao amin'ny toerana iray mirehitra izy. Rehefa manomboka maniry ny voa, dia nesorina sy nambolena tao anaty tany izy ireo.
Tariby ny masomboly ao an-trano ho an'ny zana-ketsa
Mba hanomanana ny zana-ketsa dia nambolena tao anaty tany ny voany, izay novidina tao amin'ny fivarotana manokana na niomana tsy miankina. Azonao atao ny mampiasa fonon-tsakafo, dite ary fasika amin'ny habeny: 3: 1: 0.25.
Ny tany dia mando sy mifangaro mba hahatonga azy ho homamiadana sy hohanina amin'ny fahamendrehana. Avy eo dia mametaka amin'ny alalan'ny pensilihazo, izay misy voa namboarina mialoha ny tany. Ny lavaka manaraka dia vita amin'ny lavaka 2.5-3 cm. Rehefa voa nafafy ny voa rehetra, dia alaina ny rano ary tondraka.
Rehefa avy nipoitra ny ravina 3-4, dia tafidina ao anaty kaopy izy ireo.
Tafio ny fakom-boankazo
Ny fakan-tsakafon'ny tsimokaretina masomboly dia miankina amin'ny vokatra izay hitomboanao. Ohatra, ny piper na tomato toy ny hafanana. Ho azy ireo dia takiana ny mari-pana amin'ny 20-25 ° C. Ny ambioka dia napetraka teo ambonin'ny pilina eo amin'ny varavarankely eo amin'ny varavarankely izay manondro ny atsinanana na atsimo.
Tsy tian'ny kalo ny hafanana, ampy ho azy izany + 15-18 º C, ka tsy napetraka eo akaikin'ny batterie.
Amin'ny alina dia tokony hidina ny mari-pana. Mba hanaovana izany, sokafy ny varavarankely ary ataovy ny takela-by, ary ny rivotra mangatsiaka dia mianjera amin'ny varavarankely.
Ny fanimbana ny masomboly dia mitaky fanaraha-maso tsy tapaka azy ireo. Ilaina ny manara-maso fa ny fandanjana ny fahazavana sy ny hafanana dia voamarina, ny rivotra ao amin'ny efitrano dia tsy maina, ny tanety dia ampy tsara. Izany dia hanampy anao hitombo ny zana-kafe .
Cabbage kohlrabi - fambolena sy fiahiana, ny tsiambaratelo vokatra tsara
Ahoana no hanangonana voa voatokana ao an-trano?
Kosmeya - fitsangatsanganana sy fikarakarana
Ahoana no hambolena pears?
Rahoviana vao manomboka mamoa ny pesta rehefa avy mamboly?
Top dressing of beets
Ahoana no mampitombo ny nifiny?
Lalao maotera ho an'ny ankizy eny an-dalana amin'ny fahavaratra
Make up for the eyes narrow
Famolavolana tavoahangy ao anaty trano iray
Georgina Rodriguez dia hanome an'i Cristiano Ronaldo zanakavavy iray
Pizza miaraka amin'ny sausage sy cheese
Shambhala amin'ny angano sy tantara - nahoana no nitady an'i Shambhala i Hitler?
Ratsy ho an'ny ordinatera ho an'ny ankizy
Mangomanga Mangosteen amin'ny lanjany mihoatra ny lanjany - ohatrinona ary ahoana no tokony halaina?
Ny satroka ao Helsinki dia zava-maotina amin'ny fanamboarana akorandriaka lehibe
Ny modely Chloe Eyling dia nalaina an-keriny noho ny antony nivarotana ho andevo
Fiomanana ho an'ny ririnina
Afobe avy amin'ny streptoderma